ရည်ညွှန်းငွေလဲလှယ်နှုန်းအား Mid rate အဖြစ် သတ်မှတ်၍ ± ၀. ၈ ရာခိုင်နှုန်းဘောင်အတွင်းသာ ရောင်းဝယ်မှုပြ | Myanmar Automobile Directory - Automotive Parts & Accessories Guide - Myanmar Automobile and Equipment Directory
USD 1,850 1,858
EUR 1,956 1,966
SGD 1,342 1,348
USD 1,843 1,854
EUR 2,050 2,065
SGD 1,360 1,372
Highway BUS Login
Home Categories News
Brand Events & Exhibitions International Local
How To Rules & Regulations Tips
Now Time to Buy Brand New Car Used Car Motorcycle
Advertise with Us About Us Our Guides Job Boards
ရည်ညွှန်းငွေလဲလှယ်နှုန်းအား Mid rate အဖြစ် သတ်မှတ်၍ ± ၀. ၈ ရာခိုင်နှုန်းဘောင်အတွင်းသာ ရောင်းဝယ်ရန်
နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်းသတ်မှတ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ နိုင်ငံခြားသုံးငွေများ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသည့်လုပ်ငန်း (A.D) လိုင်စင်ရဘဏ်များနှင့် အစည်းအဝေးကျင်းပခဲ့သည်။
နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်း တည်ငြိမ်ရေး အတွက် နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်း သတ်မှတ်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အစည်း အဝေးကို ယနေ့ မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် အစည်းအဝေး ခန်းမ၌ ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်ဖြင့် ကျင်းပသည်။ အစည်းအဝေးသို့ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းသော်၊ နိုင်ငံခြားသုံးငွေ စီမံခန့်ခွဲမှုဌာန ညွှန်ကြား ရေးမှူးချုပ်နှင့်တာဝန်ရှိသူများ၊ နိုင်ငံခြား သုံးငွေများ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသည့် လုပ်ငန်း (A.D) လိုင်စင်ရဘဏ်များမှ အကြီးတန်းအရာရှိများနှင့် ပြည်တွင်း ဘဏ် ၂၄ ဘဏ်နှင့် နိုင်ငံခြားဘဏ် ၂၀ စုစုပေါင်း ၄၄ ဘဏ်တက်ရောက်ကြသည်။
အစည်းအဝေးတွင် နိုင်ငံခြားငွေ ဈေးနှုန်း မြင့်မားလာမှုအား ဘဏ်များက ဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းရန် ညွှန်ကြားထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း၊
သို့သော် ဈေးနှုန်းများ မြင့်မားလာဆဲဖြစ်သည်ကို တွေ့ရကြောင်း၊
နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်း မြင့်မားမှုသည် နိုင်ငံတော်၏ နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှု၊ စီးပွားရေးတည်ငြိမ်မှုကို ထိခိုက်စေနိုင် သည့်အတွက် လွန်စွာအရေးကြီးပါကြောင်း ၊
ကိုဗစ်-၁၉ ဖြစ်ပွားမှုအချိန်တွင် အခြား ကုန်စည်ဈေးနှုန်းမြင့်မားမှု မဖြစ် ပေါ်စေရေးနှင့် ဖြစ်သင့်သော ဈေးနှုန်းတစ်ခုတွင် နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်း တည်ငြိမ်မှုရှိစေရေး ဘဏ်များက နိုင်ငံခြားငွေ ရောင်းဝယ်မှုကို ကန့်သတ်ချက်အတွင်းသာ ရောင်းဝယ်ရန်နှင့် မဖြစ်မနေဝယ်ယူရမည့် ကျန်းမာရေးနှင့် ဆိုင်သည့် ကိစ္စရပ်များအတွက် နိုင်ငံခြားငွေ အသုံးပြုရန် လိုအပ်လာပါက မြန်မာ နိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်သို့ တင်ပြရန်နှင့် တတ်နိုင်သမျှ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွား မည်ဖြစ်ကြောင်း၊
မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်မှ နိုင်ငံခြားငွေ လိုအပ်ချက် အား အထိုက်အလျောက် ဖြည့်တင်း ပေးနိုင်ရန် Special Auction ခေါ်ယူ၍ A.D ဘဏ်များသို့ နိုင်ငံခြားငွေများ ရောင်းချပေးခဲ့ပြီး ရောင်းချပေးခဲ့သော နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်းအား ရည်ညွှန်း ငွေလဲလှယ်နှုန်းအဖြစ် သတ်မှတ်ကြေညာခဲ့ပါကြောင်း၊
မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ် အနေဖြင့် ယခင်ကျင့်သုံးလျက်ရှိသော ဈေးကွက်အခြေခံသည့် ရည်ညွှန်းငွေ လဲလှယ်နှုန်း သတ်မှတ်ခြင်း အစား Auction ခေါ်ယူ၍ ရောင်းချသောဈေးနှုန်း ကိုသာ ရည်ညွှန်းငွေလဲလှယ်နှုနးအဖြစ် ကြေညာမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊
ယခင်က နိုင်ငံခြားငွေ ဝယ်ယူ၊ ရောင်းချ၊ လဲလှယ်ခြင်းများ ဆောင်ရွက် ရာတွင် ရောင်းဈေးနှုန်းနှင့် ဝယ်ဈေးနှုန်း အကြား ကွာဟချက် (Spread) အား ၁ ရာခိုင်နှုန်းထက်မပိုစေဘဲ သတ်မှတ်ဆောင်ရွက်ခြင်းအစား ရည်ညွှန်းငွေလဲလှယ်နှုန်းအား Mid rate အဖြစ် သတ်မှတ်၍ ± ၀ ဒသမ ၈ ရာခိုင်နှုန်း ဘောင်အတွင်းသာ ရောင်းဝယ်မှုပြုရန် ညွှန်ကြားချက် ပြင်ဆင်ထုတ်ပြန်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊
ဘဏ်များက စည်းကမ်း တကျနှင့်ညီညွတ်စွာ သတ်မှတ်ဘောင် အတွင်း ဆောင်ရွက်မည်ဆိုပါက နိုင်ငံခြား ငွေလဲလှယ်နှုန်းမြင့်မားခြင်းကို ထိန်းသိမ်း နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊
ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ များ ဖြစ်ပွားနေချိန်တွင် ဒေါ်လာဈေးနှုန်း မြင့်မားမှုကြောင့် အခြားကုန်စည်ဈေးနှုန်း များ မြင့်မားလာပါက ပြည်သူလူထု အတွက် များစွာထိခိုက်နစ်နာမည်ဖြစ်သည့်အတွက် တာဝန်တစ်ရပ်အနေ ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရန်နှင့် ထုတ်ပြန် မည့် ညွှန်ကြားချက်အပေါ် အကြံပြု ဆွေးနွေးကြရန် ဆွေးနွေးဖိတ်ခေါ်ခဲ့ရာ ဘဏ်အသီးသီးက မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်မှ သတ်မှတ်မည့်ညွှန်ကြား ချက်အား လိုက်နာမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ဝိုင်းဝန်း ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့ကြသည်။
Local Read 310 times
၂၀၂၂ မတ်လတွင် အာဆီယံ ၆ နိုင်ငံမှာ ထိုင်းက ကားအများဆုံး ထုတ်လုပ်ခဲ့
Tesla ရဲ့ ရှန်ဟိုင်းကားစက်ရုံ ထုတ်လုပ်စီးရေ ၂ ဆ တိုးမြှင့်တော့မည်
VW က လျှပ်စစ်ဗင်ကား ID.Buzz ရောင်းဈေးများ ထုတ်ပြန်ကြေညာ
BYD Seal EV ၆ နာရီအတွင်း စီးရေ ၂၂,၀၀၀ ကျော် ကြိုတင်အမှာ ရောင်းချရ
အမေရိကန်မှာ အရောင်းရဆုံး Honda Civic က ဂျပန်မှာ အရောင်းထိုင်းတာ ဘာကြောင့်လဲ
6-9th Floor, Building C, New Mingalar Market, Corner of Set Yone Road & Banyar Dala Road, Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon, Myanmar.
Hotline :09 448001662, 09 770881999
Copyright © 2021 Myanmar Automobile Industry Guide, Myanmar's Leading Yellow Pages Business Directory. All Right Reserved.